NTVDAILYNEWS.COM – NEWS
अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या !
सलमानको शोमा हिन्दी गीतमा कोरस भएर नाच्न नेपाली नायिकाहरुले गरे अस्विकार, क-कस्ले गरे अस्विकार ?
सन्दीपको बलिङमा दिल्लीले दियो येस्तो प्रतिक्रिया
‘वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई उपसभामुख अफर गर्नुपर्छ’
March 13, 2018 NTVDAILYNEWSLeaveaComment on भूकम्पपीडितहरू सबैको नाममा खाता खोलिएको कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो
भूकम्पपीडितहरू सबैको नाममा खाता खोलिएको कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो । अब उनीहरूले पाउने रकम पनि सहज रूपमा उपलब्ध गराइयोस् । कसैले कुनै झन्झट बेहोर्नु नपरोस् । महेश भट्ट बाराको अमलेखगन्ज वडा नम्बर–९ चकारीमा खानेपानीको चरम अभाव छ । दैनिक जीवन चलाउन पनि सार्‍है समस्या छ । सम्बन्धित निकायले जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो […]
February 10, 2018 NTVDAILYNEWSLeaveaComment on अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या !
भारतीय सिने उद्योग बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना भएका छन् । अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पछि अमिताभलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो । अमिताभलाई भारतको मुम्बईस्थित लीलावती अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनको स्वास्थ्यस्थित कस्तो छ भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी बाहिर आउन सकेको छैन । अस्पतालमा अमिताभका सबै आफन्त जम्मा भएका छन् । उनका शुभचिन्तक […]
February 10, 2018 NTVDAILYNEWSLeaveaComment on सलमानको शोमा हिन्दी गीतमा कोरस भएर नाच्न नेपाली नायिकाहरुले गरे अस्विकार, क-कस्ले गरे अस्विकार ?
काठमाडौँ । मार्च १० तारिख, टुंडिखेलमा हुने सलमान खानको ‘दबंग द टुर’ मा नेपाली नायिकाहरु प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का र एलिशा राईले अस्विकार गरेका छन् । उनीहरुले आफुलाई सम्मान नभएको भन्दै सलमानको शोमा नाच्न अस्वकार गरेका हुन् । नायिका स्वस्तिमा खड्काले भनिन्-‘हामीलाई सम्मान नै भएन,हामी सलमान खानको कोरस भएर नाच्नु पर्ने त्यो पनि हिन्दी गीतमा […]
February 10, 2018 NTVDAILYNEWSLeaveaComment on सन्दीपको बलिङमा दिल्लीले दियो येस्तो प्रतिक्रिया
बिहिबार नामिबियाविरुद्ध सन्दीप लामिछानेले गरेको बलिङलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले ‘ब्रिलियन्ट स्पेल’ भनेको छ। आफ्नो फेसबुक र ट्वीटरमा डेयरडेभिल्सले सन्दीपको उत्कृष्ट बलिङले नेपालले नामिबियालाई एक सय ३८ रनमा अलआउट गर्न सफल भएको टिप्पणी गरेको छ। सन्दीप आईपिएसलको यो सिजनमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेल्दैछन्। आईपिएलमा सहभागी हुने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन। आईसिसी डिभिजन–२ को पहिलो खेलमा सन्दीपले प्रभावशाली […]
February 10, 2018 February 10, 2018 NTVDAILYNEWSLeaveaComment on ‘वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई उपसभामुख अफर गर्नुपर्छ’
२७ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभाको उपसभामुख आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आहृवान प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन तर, प्रदेशसभाहरुले सभामुख र उपसभामुख चुन्न थालेका छन् । प्रदेश ३ ले सभामुख पाएको छ भने उपसभामुख चयनका लागि भोलि निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ । तर, कांग्रेस नेताहरु भने आफ्नो दललाई […]
NTV DAILY NEWS	| Theme: News Portal by Technician Group of Nepal.